Mametraha trano fonenana ao an-trano ary araraoty tsara ny ririnina | Bezzia
Maria vazquez | 13/09/2021 20:00 | Decor
Tianao manana zaridaina kely? Afaka mampitombo ny sakafonao avy amin'ny voa? Mbola mankafy zaridaina amin'ny ririnina koa? Trano fandraisam-bahiny ao an-trano no vahaolana hiarovana ireo zavamaniry sy voninkazo marefo anao indrindra amin'ny hatsiaka, orana na oram-panala amin'ny ririnina.
Ho avy izao ny ririnina Mametraha trano fonenana ao an-trano! Hamela anao hanohy hankafy ny fambolena sy ny zaridaina amin'izao vanim-potoana izao, ary koa hanome anao toerana fialan-tsasatra. Miaraha amin'ny kinova mahaliana sy mateza kokoa toa ny trano fitaratra fitaratra na mamorona trano fandraisam-bahiny misy fitaovana mora vidy kokoa.
1 Tombontsoa amin'ny fananana trano fandraisam-bahiny any an-trano
2 Karazana trano fonenana
2.1 Ny vera
2.3 Kely ny habeny
Tombontsoa amin'ny fananana trano fandraisam-bahiny any an-trano
Betsaka ny tombony azo amin'ny fametrahana trano fandraisam-bahiny any an-trano, fa ny hatsiaka kosa ny toerana onenanay. Andao isika smanohiza miasa ao amin'ny zaridainantsika na miaraka amin'ireo zavamaniry aminay amin'ny ririnina, miaro ireo amin'ny hatsiaka. Izay angamba no tombony lehibe indrindra fa tsy izay ihany.
Izy io dia singa haingon-trano sy haingo tena manintona. Singa iray afaka manintona kokoa ny zaridainantsika.
Io no toerana mety indrindra arovy ireo zavamaniry marefo indrindra mandritra ny ririnina dia manohy mankafy azy ireo any ivelany amin'ny lohataona.
Tena ilaina izy io rehefa mamboly legioma antsika mandritra ny fotoana mangatsiaka indrindra amin'ny taona. Io dia ahafahantsika mampitombo ny vokatra sy miantoka ny fahombiazan'ny fanapahana sy zana-ketsa.
Manome toerana ho antsika izy io maniry karazana avy amin'ny toetrandro mafana sy tany mafana
Mety ho lasa a koa izy io toerana tonga lafatra any ivelany avy ao an-trano amin'ny mari-pana tsara amin'ny fotoana mangatsiaka kokoa amin'ny taona. Tsy mila mametraka latabatra kely fotsiny ianao sy seza misy sandry eo amboniny.
Karazana trano fonenana
Ny asan'ny trano fandraisam-bahiny dia mamorona tontolo voafehy (microclimate) Izy io dia mitazona ny hafanana, ny hamandoana ary ny hazavana tsara indrindra mba hitomboan'ny zavamaniry sy ny voninkazo ary voaro amin'ny toetr'andro ratsy. Na izany aza, tsy ny trano fandraisam-bahiny rehetra eny an-tsena no manatanteraka an'io asa io amin'ny fomba mitovy, noho izany dia zava-dehibe ny manontany tena amin'ny tenanao alohan'ny hanombohana hividy iray.
Inona no hampiasanao ny trano fonenana? Ity no fanontaniana voalohany tokony hapetrakao amin'ny tenanao raha nanapa-kevitra ny hametraka trano fonenana ao anaty zaridaina ianao. Tsy ny trano fandraisam-bahiny rehetra no manome rivo-piainana mahafinaritra hampiasana ho faritra fialan-tsasatra. Tsy ny fitaovana rehetra no anaovana azy rehetra, izay misy akony amin'ny kalitaony ary, mazava ho azy, ny teti-bola ilaina hahazoana iray.
Betsaka ny karazana trano fandraisam-bahiny, arakaraka ny fitaovana, ny habeny, ny endriny ... Androany ny tanjonay dia ny hampiseho aminao ny tadin'ny borosy vitsivitsy amin'ny sasany amin'ireny, ny malaza indrindra, ka farafaharatsiny mba mazava aminao hoe aiza no hanombohana mitady.
Ny trano fonenana fitaratra dia mankafy ny hatsarana mitandrina tsara sy manome ny insulate tsara indrindra. Izy ireo koa no lafo indrindra. Ny vera dia manome ny hamirapiratra ilaina amin'ny fitomboan'ny zavamaniry ary ny fahitana madio tanteraka avy ao anatiny ka hatrany ivelany ary ny mifamadika amin'izany.
Izy ireo no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpikarakara zaridaina mitaky ezaka, nefa koa ny mety indrindra amin'ny famoronana toerana fialan-tsasatra any ivelany. Raha ny amin'ny famoronana fanitarana rakotra trano ao amin'ny zaridaina, izy ireo no be mpitady indrindra. Tena maharitra izy ireo dia safidy maharitra kokoa noho ireo vita amin'ny akora plastika.
Misy karazany maro ny endrika amam-baravarankely misy fonony plastika. Fitaovana takelaka toy ny polycarbonate na polymethacrylate, manome trano mavesatra izy ireo izay tsy azo tanterahina amin'ny sary mihetsika na sarimihetsika toy ny polyethylene (PE) na polyvinyl chloride (PVC).
Tsy dia manintona toy ny vera izy ireo, na izany aza, ireo vita amin'ny lovia dia tsy dia lavitra an'ireo ary mora kokoa. Ho fanampin'izany, izy ireo dia fitaovana izay mora kokoa hiasa, noho izany dia ho mpitantana kely ny tenanao afaka manamboatra trano fandraisam-bahiny manokana ianao mampiasa takelaka hazo sy polycarbonate. Ao amin'ny tranonkala, ho hitanao ihany koa ny zava-drehetra manomboka amin'ny drafitra ka hatramin'ny fampianarana hahafantatra ny fomba hanaovana azy.
Na amin'ny fitaovana iray na amin'ny hafa dia azo atao ny mahita, ho fanampin'izay, trano fandraisam-bahiny kely toy ireo aseho amin'ny sary ireo. Raha mila toerana iray hiarovana ny zavamaniry mandritra ny ririnina ianao, hahafahana mamorona ambioka kely na maniry legioma vitsivitsy, ity no vahaolana mety indrindra. Ho ahy manokana, tiako ireo safidy mifatotra amin'ny endrika tarehy, sa tsy izany?
Mikaroha iray toerana tsara ho an'ny tranoona, Raha tsy misy aloky ny hazo na tranobe lehibe ka mahazo masoandro 6 ora isan'andro farafahakeliny, refeso tsara ny habaka ary apetraho trano fandraisam-bahiny any an-trano- Ho be dia be ny azonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Mametraha trano fonenana ao an-trano ary araraoty tsara ny ririnina
Inona avy ireo antony mahatonga ny tsy fahatokiana ara-pihetseham-po